စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
စတော့ရှယ်ယာများအကြောင်းဆိုသည်နှင့် လူများသည် Wall Street၊ ရေးကြီးခွင်ကျယ်ကိစ္စများနှင့် စတော့ရှယ်ယာအိတ်ချိန်းများ၊ အကျိုးအမြတ်ခံစားရရန် ကြိုးစားနေသည့် အော်နေကြသည့် လူထောင်ပေါင်းများစွာကို မြင်ယောင်မိတတ်ကြသည်။ သင်လည်းတူတူပဲဆိုတာ ဝန်ခံလိုက်ပါ! ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း အဲ့လိုဟုတ်ရဲ့လား? စတော့ရှယ်ယာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရန်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား? ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဤဆောင်းပါးမှာ၊ အခက်အခဲနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုများမရှိဘဲ စတော့ရှယ်ယာ ဘယ်လိုရောင်းဝယ်ရမလဲ ပြောပြသွားပါမည်။
ရွေးချယ်ခွင့်နှစ်ခုရှိသည်: တကယ့်စတော့ရှယ်ယာများကို ဝယ်မလား (သို့) ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကို ရောင်းဝယ်မလား။
တကယ့်စတော့ရှယ်ယာများဝယ်ယူခြင်းသည် အတော်လေးခက်ခဲသည့် အပေးအယူဖြစ်သည်။ ရှေးဦးစွာ၊ ငွေမြောက်များစွာရှိရန် လိုအပ်သည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးမှာ သင့်ကိုကူညီပြီး၊ သင့်အတွက်လုပ်ပေးမည့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးရှိရန်လိုပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် တကယ့်အပေးအယူများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမှာနှင့် ကောင်းမွန်တဲ့ဈေးနှုန်းမှာ စတော့ရှယ်ယာကို ဖမ်းဆုပ်မိရန် ကြိုးစားရင်းစိတ်ဖိစီးခြင်း ဘယ်ဟာက ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးသလဲ။
အခုဆို သင့်မှာ မေးခွန်းရှိလာပါပြီ: အကယ်၍ကျွန်တော်သာ ဒီအခက်အခဲတွေအားလုံးကို ကိုင်တွယ်မဖြေရှင်းချင်ဘူး၊ စတော့ရှယ်ယာတွေ ဝယ်ဖို့ဒီလောက်ငွေအများကြီးမရှိဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ သင့်မှာ အခွင့်အရေးကြီးရှိပါတယ်။
စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာ သင်ဟာ တကယ့်ရှယ်ယာအစစ်တွေရမှာမဟုတ်ပေမယ့် ဈေးနှုန်းရွေ့လျှားမှုအပေါ် ချင့်ချိန်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းအတိုင်း ရောင်းဝယ်သည့်အခါ၊ သင်ဟာ စတော့ရှယ်ယာတွေကို တကယ်ဝယ်တာမဟုတ်ဘဲ၊ အဲ့အစား၊ ဈေးနှုန်းကို ခန့်မှန်းပြီး သင့်ခန့်မှန်းချက်ပေါ် ရောင်းဝယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည် ဝယ်ရန် (သို့) ရောင်းရန် အော်ဒါတစ်ခု ထားမှာဖြစ်ပြီး၊ အကျိုးဆောင်မှ သင့်ကိုယ်စား အပေးအယူလုပ်မှာဖြစ်သည်။
သင်ဟာ ရှယ်ယာတွေပိုင်ဆိုင်ချင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ခုတော့ သင်ဝမ်းနည်းနေရပြီ၊ အဲ့လိုမဖြစ်သင့်ပါ။ ပထမအကျိုးကျေးဇူးမှာ စတင်ရန် ဘတ်ဂျတ်ကြီးမလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ အကျိုးဆောင်မှ ကောင်းမွန်သော leverage တစ်ခုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့် သင့်အားအမြဲကူညီပါလိမ့်မည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ သင်ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ကင်းဝေးပါတယ်။ သင့်မှာသုံးသပ်ရန်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ရရန်နှင့် အနေအထားတစ်ခုဖွင့်ရန် အချိန်ရှိသည်။ ပြီးတော့ ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတာက၊ သင်သည် စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးများ၏ အတက်နှင့် အကျနှစ်ခုစလုံးတွင် ငွေရှာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာက စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးများကို သက်ရောက်သနည်း။
ဈေးကွက်တိုင်းတွင် ၎င်း၏ဦးတည်ရာကို ဆုံးဖြတ်သည့် ၎င်းကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါသည်။ စတော့ရှယ်ယာ လှုပ်ရှားမှုများကို အောင်မြင်စွာခန့်မှန်းရန်အတွက် သင်လိုက်နာရန်လိုသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းလေးခုရှိသည်။
ကုမ္ပဏီမှရရှိသည့် ငွေပမာဏသည် ၎င်း၏ စတော့ရှယ်ယာများတန်ဖိုးကို သက်ရောက်သည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဝင်ငွေရရှိမှုသည် ကုမ္ပဏီ၏ အမြတ်အစွန်းဖြစ်သည်။ ဤအမြတ်သည် ၎င်း၏ ဘဏ္ဍာရေးကျမ်းမာမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
ဘယ်လိုလိုက်နာရမလဲ။ US တွင်၊ လူသိရှင်ကြားရောင်းဝယ်သည့် ကုမ္ပဏီများသည် သုံးလတစ်ကြိမ် သူတို့၏ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်များကို အစီရင်ခံရန် ဥပဒေအားဖြင့်လိုအပ်ပါသည်။
ဘယ်လိုရောင်းဝယ်ရမလဲ။ ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ချီမှု မပြုလုပ်ခင်၊ သုံးသပ်သူများသည် ရလဒ်များကို ကြိုမှန်းကြသည်။ ကြိုခန့်မှန်းချက်အားလုံးအား သဘောတူညီမှုဝင်ငွေခန့်မှန်းချက်များတွင် သုတေသနပြုကုမ္ပဏီများမှ စုဆောင်းထားကြသည်။ ခန့်မှန်းခြေကို ဆန်းစစ်ပြီး၊ တကယ့်ကိန်းဂဏန်းများကို လိုက်နာပါ။ တကယ့်ဒေတာသည် ခန့်မှန်းချက်ထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ပါက၊ ဈေးနှုန်းတက်လိမ့်မည်။ အားနည်းသော ဝင်ငွေထုတ်ပြန်ချက်အနေအထားတွင်၊ ယင်းတို့ကျပါလိမ့်မည်။
အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုမှာ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ပြဿနာများနှင့် မသေချာမှုများသည် ၎င်း၏ စတော့ရှယ်ယာများတန်ဖိုးကိုလည်း သက်ရောက်ပါလိမ့်မည်။ CEO အပြောင်းအလဲ၊ မိန့်ခွန်းများနှင့် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ၏ မှတ်ချက်များ၊ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် လက်လွှဲပြောင်းခြင်းအလားအလာများသည် စတော့ရှယ်ယာများ၏ မြင့်မားသော ဈေးလှုပ်ခတ်မှုကို ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။
ဥပမာတစ်ခုကို သုံးသပ်ရအောင်။ Elon Muskမှ တက်စလာပုဂ္ဂလိကအား $၄၂၀မှာလိုချင်တယ်လို့ tweet လုပ်ခဲ့တာမှတ်မိသေးလား? ထို tweetပြီးနောက်၊ တက်စလာ၏ စတော့ရှယ်ယာများ သိသိသာသာမြင့်တက်သွားပြီး၊ NASDAQမှ တက်စလာစတော့ရှယ်ယာများကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ရယ်စရာအကောင်းဆုံးကတော့ ဒါဟာ twitterက မက်ဆေ့တစ်ခုသာဖြစ်ပေမယ့် ဈေးကွက်ကို အတော်လေးလှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။
ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား (S/D) အမှတ်သည် ပြည်တွင်းရေးပြဿနာများ၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ပေါင်းထည့်နိုင်ပါသည်။
S/D အကြောင်းရင်းသည် ဘယ်ဈေးကွက်ကို သူတို့သုံးသပ်နေပါစေ ရောင်းဝယ်သူများနှင့် သုံးသပ်သူများမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ၎င်းသည်ရှယ်ယာများကို ပြန်ဝယ်နေသည်ဟု ကြေညာပါက၊ စတော့တန်ဖိုးများ တက်လာမှုကို အားပေးလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီမှ ပိုများသောရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းပါက၊ ဈေးနှုန်းကျလိမ့်မည်။
ဘယ်လိုလိုက်နာရမလဲ။ သင်ရောင်းဝယ်ချင်သည့် ရှယ်ယာများပိုင်သည့် ကုမ္ပဏီနှု့် ဆက်နွယ်နေသည့်သတင်းများကို ဆန်းစစ်ပါ။
ဘယ်လိုရောင်းဝယ်ရမလဲ။ သတင်းများ၏ ထိရောက်မှုများကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပါ၊ ဈေးကွက်တုန့်ပြန်မှုကို စောင့်ဆိုင်းပြီး၊ ဈေးကွက်စိတ်ခံစားချက်နောက် လိုက်ပါ။
၃။ စက်မှုလုပ်ငန်း သတင်းများ
ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အတွင်းရေးပတ်ဝန်းကျင်သာမက၊ အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ၎င်း၏ စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ တိကျသည့်ကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်သည့်သတင်းများသည် ကုမ္ပဏီများ၏ စတော့ရှယ်ယာများကို အတော်လေးသက်ရောက်သည်။ ထို့ကြောင့် ရောင်းဝယ်သူများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းများကို ဆန်းစစ်ရန်လိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ Facebook၏ စတော့ရှယ်ယာများကို ရောင်းဝယ်ချင်ပါက၊ သင်သည် နည်းပညာကဏ္ဍရှိ သတင်းများကို ဆန်းစစ်သင့်ပါသည်။
ဘယ်လိုလိုက်နာရမလဲ။ သင်ရွေးချယ်သည့် ကဏ္ဍနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် သတင်းများကို ဆန်းစစ်ပါ။
ဘယ်လိုရောင်းဝယ်ရမလဲ။ သတင်းသည် အရေးကြီးသလား၊ မကြီးသလား၊ ကုမ္ပဏီပေါ်တွင် ဘယ်အရာက သက်ရောက်နိုင်သလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါ။ ဈေးကွက်စိတ်အခြေအနေများကို လိုက်နာပြီး၊ အနေအထားများဖွင့်ပါ။
၄။ သုံးသပ်သူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
သုံးသပ်သူများသည် စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးများကို သက်ရောက်သည့် အကြောင်းရင်းများစွာကို ထည့်စဉ်းစားပါသည်။ ထို့နောက် သူတို့သည် ဝယ်မလား၊ ရောင်းမလား၊ (သို့) ကိုင်ထားမလားဆိုတဲ့အပေါ် အကြံပြုချက်များ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ တကယ့်စတော့ရှယ်ယာများ မဝယ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ၊ ထိုအကြံပြုချက်များသည် ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးတွင်ရောင်းဝယ်ရန် ကူညီပါလိမ့်မည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော သင်သည် ဈေးကွက်စိတ်ခံစားချက်ကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုလိုက်နာရမလဲ။ သင်လုပ်ရန်လိုသည်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချသည့် အရင်းအမြစ်များတွင် အကြံပြုချက်များ ဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ သုံးသပ်သူ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် မြင့်မားစွာအသုံးဝင်သည့် အထောက်အကူများဖြစ်သည်။ သုံးသပ်သူများသည် ဈေးနှုန်းကို သက်ရောက်သည့် အရေးကြီးအကြောင်းရင်းများကို ဖော်ပြထားသည့် သူတို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ၏ နက်ရှိုင်းသောရှင်းလင်းချက်များကို ပေးပါသည်၊ ဒါဟာ ကံကောင်းမှုကြီးပါ။ ရှေးဦးစွာ၊ သင့်ဘာသာ သုတေသနပြုရန်မလိုပါ။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင် ခန့်မှန်းချက်များပြုလုပ်ရန် အချက်အလက်များသုံးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အကြံပြုချက်များ အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ဈေးကွက်စိတ်ခံစားချက်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး၊ သင့်စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်မှာဖြစ်သည်။
အကြံပြုချက်လေးတစ်ခု: လူသားအကြောင်းရင်းအကြောင်း အမြဲအမှတ်ရပါ။ ခန့်မှန်းချက်များနောက် ဆင်ကန်းတောတိုးမလိုက်ပါနဲ့။ ကျွန်တေ်ာတို့အားလုံး အမှားများလုပ်တတ်ပြီး၊ ခန့်မှန်းချက်များသည်လည်း မှားနိုင်ပါသည်။ သုံးသပ်သူများ၏ ကြိုမှန်းချက်များကို သင့်ကိုယ်ပိုင်ဟာနှင့် ပေါင်းစပ်ရန်ပိုကောင်းပါသည်။
စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်သည် ၎င်းကိုသက်ရောက်သည့် အကြောင်းရာများကွဲပြားပေမယ့် ဈေးကွက်ရွေ့လျှားမှုများအား သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ခန့်မှန်းခြင်းနည်းကတော့ မကွာခြားပါဘူး။ ငွေကြေးအတွဲများ (သို့) ကုန်စည်များရောင်းဝယ်ရန် သင်ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါသလား? အခြေခံသုံးသပ်ချက် (သို့) နည်းပညာအညွှန်းကိန်းများကို သုံးဖူးပါသလား? သင်လုပ်ဖူးပါက၊ စတော့ရှယ်ယာ ရောင်းဝယ်ရာတွင် မည်သည့်အခက်အခဲမှရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သင်အနှစ်သက်ဆုံး နည်းပညာအညွှန်းကိန်းများကို ထားပြီး၊ အခြေခံအချက်များကို လိုက်နာပါ။
စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက်တွင် သင်ဘာလို့မြှုပ်နှံသင့်တာလဲ။
စတော့ရှယ်ယာများသည် မြင့်မားသော မတည်ငြိမ်မှုအတွက် အကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး၊ သင့်သဘောထားအရ သုံးနိုင်ပါသည်။ မြင့်မားသော မတည်ငြိမ်မှုသည် ငွေမြောက်များစွာ ရှာဖွေရန် အလားအလာဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဤမြင့်မားသော မတည်ငြိမ်မှုကြီးမှ ယူဆောင်လာနိုင်သည့် ကြီးမားသည့်ဆုံးရှုံးမှုများအကြောင်းကို မမေ့ပါနှင့်။ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွင် အောင်မြင်ရန်၊ ဈေးကွက်စိတ်ခံစားချက်ကို လိုက်နာရန်၊ ဈေးနှုန်းကို သက်ရောက်နိုင်မည့် ထုတ်ပြန်ချက်များ မလွတ်စေရန် အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်နေရန်၊ အရေးပါသော သတင်းများကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် တုန့်ပြန်ရန်နှင့် ဒါပေါ့၊ stop lossတွေကို သုံးရန်သာလိုပါသည်။
စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်သည် Apple, Amazon, Facebook, Google စသည်တို့ကဲ့သို့ နာမည်ကြီးများနှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် နီးကပ်နေရတာကို ဂုဏ်ယူတယ်လို့မခံစားရဘူးလား? ဒါပေါ့၊ စတော့ရှယ်ယာ အရောင်းအဝယ်၏ ဂုရုဖြစ်လာရန် အခွင့်အရေးသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိပါသည်၊ ဟုတ်တယ်မလား?
နိဂုံးချုပ်ရသော်၊ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရှိ ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ရွေးပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါသည်။ ရှေးဦးစွာ၊ ဈေးနှုန်းတက်သည် (သို့) ကျသည်ဖြစ်စေ သင်အမြဲငွေရှာနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် သင့်အမြတ်ကို သိသိသာသာအရှိန်မြှင့်ရန် အခွင့်အရေးတစ်ခု ပေးသည့် ဈေးကွက်သည် မြင့်မားစွာလှုပ်ခတ်ပါသည်။ တတိယအနေဖြင့်၊ သင့်အား Wall Streetနှင့် ပိုနီးကပ်စေသည့် ကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ စတော့ရှယ်ယာပြည့်ဝနေသည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်!